Azia Atsimo: Vahoaka, Vavaka, Sarimihetsika ary Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2018 2:54 GMT
Ny resaka malaza farany avy amin'ny blaogy maro samihafa ao Azia Atsimo:
- Mamariparitra ny antony ahazoana tombontsoa amin'ny fanaovana sorona biby iray ao amin'ny fireneny mandritra ny Eid-ul-Azha i Mezba avy amin'ny Bengali in TO, Bangladeshi mpifindramonina mipetraka any Kanadà.
- Maminany ny hoavin'i Bangladesh i Rumi avy ao amin'ny Drishtipat raha toa ka manjaka ny toe-draharaha ara-politika ankehitriny
- Manolotra an'i Tara ilay Andriamanitra Bodista ny Kuzu Bhutan Weblog ary mivavaka ho an'ireo mpanoratra sy mpamaky ilay Blaogy.
- Mitatitra ny Kuensel Online fa taorian'ny dingana naharitra efapolo taona, tanteraka ary nofaranana ny famaritana ny sisintany iraisam-pirenena eo amin'i India sy i Bhutan.
* Milaza ao amin'ny Desicritics i Chanakya hoe – Tapakila 4 Lavitrisa Lafo ary Sarimihetsika 1000 Tontosa Isan-taona ao Bollywood, ilay orinasa Indiana mpamokatra sarimihetsika miha miitatra manerantany.
* Manana olana amin'ny fanatanterahana tetikasa iray antsoina hoe ‘Fiarabe Fanaovana Maloto’ mikendry ny hampitony ny fijalian‘ireo vehivavy mahantra tsy ampy toerana fanaovana maloto any amin'ny tanàna tsizarizary ao an-drenivohitr'i India i Rama ao amin'ny Cuckoo's call.
* Manoratra ao amin'ny Desicritics ny fanehoankeviny mikasika ny fitorian'ny lehilahy iray tezitra noho ny fisianà iray nisy fifanorohana tao amin'ilay sarimihetsika Bollywood Dhoom 2 ireo mpilalao sarimihetsika i Sakshi Juneja.
- Lazain'ny United We Blog fa manolikoly ireo Nepaley mpitondra politika ny fitondràna sy ny Pajero.
- Mampahafantatra ny South Asia Biz hoe manana hiram-pirenena vaovao i Nepal.
- Mihaona amin'ilay Nepaley lava indrindra i Deepak Adhikar.
- Manasongadina an'i Namira Salim, ilay vehivavy Pakistaney voalohany indrindra nandeha an'habakabaka ny The South Asia Biz.
- Mitatitra ny The Glasshouse fa voaara-maso ny fiainana ao Pakistana, voalamin'ny governemanta i Kashmir ary mbola miantso izany ho Kashmir malalaka foana izy.
- Mitatitra i Janantha fa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fampielezampeo niomerika an-tanety i Sri Lanka ary mihevitra fa ho fiovàna lehibe ao amin'ny fomba fijery, fihaino, fahatsapan'ny olona ny zavatra eo amin'ny fiainana izany.
- Mandinika i Alisha avy ao amin'ny The Island Life fa ny zavatra tena mahatezitra indrindra mikasika ireo fifandirana misy amin'izao fotoana izao ao Sri Lanka dia ireo toerana maro be fanarahamaso manerana ny tanàn'i Kolombo.